Lamaane 59 sano is qabay oo halmaalin wada dhintay ayagoo gacmaha is heesto isbitaalka - iftineducation.com
Lamaane 59 sano is qabay oo halmaalin wada dhintay ayagoo gacmaha is heesto isbitaalka
aadan21 / October 12, 2016
iftineducation.com – 59 sano ayay is qabeen, Lamaanahaan Halmaalin ayay wada dhinteed ayagoo gacmaha isku dhagan
Don (84 sano) iyo Margret Livengood (84 sano jir) nolol way kala geyn weysay mudo 59 sano ah ayay is qabeen, waa lamaane aad isku jeclaa, waxay kuwada noolaayeen farxad iyo reyn reyn inta ay is qabeen waligood isma dagaalin ama iskuma soo sheeko qaadin iney is furaan.
Qisadooda waxay noqotay qiso jaceyl oo dhab ah malakul mowt kaliya ayaa nakala geyn karo jaceyl keena,
Foto: copyright today.com DOn iyo Margret oo gacanta isku dhagan
Sida lagu daabacay jariirada Today.com Don iyo Margret waxay wada dhinteen halmaalin oo isku mid ah, taarikhda 15 august 2016. Margret wuxuu dhintay sacada markey eheed 08:00 kadibna waxaa ku soo xigay Don oo asagana dhintay saacada markey eheed 17:19. inteysan margred dhiman, waxey gacanteda ku dhagtay ninkeeda Don ilaa markiii danbe nafta ka baxday.
Foto: copyright today.com DOn iyo Margret oo da’ ah
” Hooyo iyo aabo aad ayay isku jeclaayeen daacadna isugu ahaayeen mudo 59 sano ah ” ayuu dhahay Petie Beaver , wiilka ay dhaleen Don iyo Margret, jaceylka waalidkooda lama kala geyn karin.
Pettie wuxuu u qaaday waalidkiisa isbitaalka bishii lasoo dhaafay, cudurka pulmonary fibrosis dan bilateral pneumonia ayuu la tacaalay Don ayaa xaaladiisa ka dhigay mid liidata, Margret na waxay laxanuunsaneed cudurka kanker dan komplikasi, taas ayaa sababtay in lagu kala daweeyo labadooda qolal kala duwan, taas ayaana Don kasii dhigtay mid lasii il darnaado xanuunka maadama xaaskiisa laga fogeeyay.
Foto: copyright today.com Arooska Don iyo Margret
Markii danbe isbitaalkii ayaa isku soo dhaweeyay lamaanahaan oo hal qol isugu keenay maadaama ay hilow xoogan isu sii qaadeen ilaa isku mar ay kawada dhintaan maalin gudaheed.
Pettie ayaa u mahad celiyay maamulka isbitaalka oo u ogolaaday aabihiis iyo hooyadiis in hal qol lagu wada daweeyo maadaama ay kala cudur qabaan (Aadan yo)
W/Q: Aadan yo
Naasaheeda Sidaan Ugu Raaxeyso Waxaa Dhacaysa In Ay Kuu Aqoonsato Xidiga Baashaalka Aduunka
Cilmi baaris cusub : mobilke oo jeebka lagu qaato wuxuu kaa dhigaa ma dhalaysnimo (caafimaadka galmada )